सिक्दै: इन्टरनेट आफैं नशेको हुन सक्छ इनाम पुरस्कार
सिक्ने इन्टरनेट एड्स
के तपाइँ इन्टरनेट भन्दा अन्य कुनै पनि ध्यान केन्द्रित गर्न यो कडा मेहनत गर्ने व्यक्तिलाई थाहा छ? के तिनीहरूले एक्लै हेरेर मात्र बढी समय खर्च गर्छन्? के तिनीहरू चिन्तित हुन्छन् जब अन्य विषयहरूले त्यसलाई त्यसबाट हटाउँछन्?
एक मनोचिकित्सक युनियनको 80% को वरिपरि उनी भन्छन् कि उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य अवस्था छैन जुन उनीहरूको लागि दबाइन्छ र जसको संकेत र लक्षण तीन हप्ताको छिटो छिटो पछि खाली हुन्छ। यी अवस्थाहरूमा अवसाद, ADHD / ADD व्यवहार र द्विध्रुवीय विकार। केवल केहि हप्ताको लागि इन्टरनेट प्रयोग हटाउँदै यो हेर्न को लागी कि लक्षणहरू एक्लै क्रियाकलाप वा हेल्थकेयर प्रदायकले सम्भावित मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको वास्तविक हो भनेर मात्र सम्बोधन गर्न सक्दछ। यद्यपि यो स्ट्यान्डलोन अवस्था हो भने, डा। डन्कीले भन्छिन् कि यो इन्टरनेटको अति प्रयोग गरेर खराब बनाइनेछ।
इन्टरनेट लत एउटा समस्या हो। यो वृद्धि संग सम्बन्धित छ सामाजिक अलगाव र सामाजिक चिन्ता। अवसाद र दुर्व्यवहार किशोरहरूको बीच इन्टरनेट लतमा बिग्रियो।
तीन हप्ता पर्दा फास्ट
विक्टोरिया डन्केले उत्कृष्ट छ पुस्तक, "आफ्नो बच्चाको ब्रेन रीसेट गर्नुहोस् - एक4हप्ता Meltdown को समाप्त गर्न, इलेक्ट्रोनिक पर्दा समय को प्रभावहरु लाई बदलन द्वारा ग्रेडिंग र सामाजिक कौशल को बढावा दिन को समय"आमाबाबुको लागि एक प्रयास र टेस्ट गरिएको योजना हो कि उनीहरुका बच्चाहरु लाई आफ्नो नशे को लत इंटरनेट वाला आदाननों को उजागर गर्न को लागी मदद को उपयोग गर्नुहोस। यद्यपि उनीहरूले इन्टरनेट अश्लील लतसँग प्रत्यक्ष व्यवहार गर्दैनन्, साक्ष्य आधारमा ठूलो मात्रामा समान छ। कार्यक्रम तीन हप्ता लाग्छ, साथै यो तयारीको एक अतिरिक्त हप्ताको आवश्यकता निश्चित गर्न यो सजिलै संग जान्छ।
इन्टरनेट लतमा जुआ, भिडियो गेमिंग, सोशल मिडिया, डेटिङ अनुप्रयोगहरू, किनमेल र पोर्नोग्राफी समावेश छन्।
इन्टरनेट पोर्नोग्राफी लत गेमिङ वा सोशल मिडिया लतहरूको तुलनामा सम्भावना अधिक हानिकारक छ किनभने यसले हाम्रो प्राकृतिक यौन इच्छा र वास्तविक मानिसहरूलाई प्रेम गर्न सक्छ।
2015 अनुसन्धान इन्टरनेट पोर्नोग्राफी लतको न्युरोसिसरमा: एक समीक्षा र अपडेटले निष्कर्षमा पुग्यो "इन्टरनेट पोर्टलोग्राफी लत लतको ढाँचामा फिट बस्छ र शेयर पदार्थसँग मिट्री लतसँग समान आधारभूत तवरमा हुन्छ।"
अत्यधिक अश्लील खपत को लक्षण अक्सर अन्य विकारहरु को नकल गर्दछ। अश्लील-प्रेरित व्यक्तिहरूबाट वास्तविक अवस्थाहरू अलग गर्न, एक राम्रो विकल्प अश्लील छिटोसँग सुरु गर्न हो। एक पटक मस्तिष्क अब अति उत्तेजित छैन, यसको यसको प्राकृतिक संवेदनशीलता पुनःप्राप्त गर्ने मौका छ।
इन्टरनेट लतको विज्ञान
यस भिडियोमा ब्लगर "मैले सिकेको छु" प्रदान गरेको विशिष्ट मस्तिष्कको राम्रो तरिकाले भ्रमण प्रदान गर्दछ जुन इन्टरनेट (र पदार्थहरू र व्यवहारहरू) लाई पनि एड्स बनाउँछ। तिनीहरूको उद्देश्य दर्शकहरूले तपाईंको दिमागलाई कसरी प्रभाव पार्छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ ताकि तपाईं यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सुरु हुँदैन (17.01)।